Izilinganiso ezinhle kakhulu ezivela ku-'Magical Index ethile '(enezithombe) - Okunye
Uhlu Lokugcina Lwama-Quotes Ozowaluthanda Kusuka Ku- “A Index ethile Yomlingo”
I-Magical Index ethile icaphuna, kuthathwe kubalingiswa:
Inkomba ethile yoMlingo i-original bekunguqulo yokuqala ngaphambili Isitimela. Uchungechunge lwe-anime lomlingo olwenziwe nguJ.C Staff.
Uma ulapha ukuthola izingcaphuno ezinhle kakhulu i-Magical Index okufanele ikunikeze, usendaweni efanele. IMecha Company yisiza esingu- # 1 sezingcaphuno ze-anime!
Ngalokho kusho - ake siqonde ngqo kuso.
Izilinganiso ezithile ze-Magical Index - Uhlu Lokugcina:
1. Izilinganiso zeKamijou Touma
'Ukuthi ukucabanga kwami ​​kubuntwana futhi akulungile, futhi nangenxa yokuthi impikiswano yami inganqotshwa kalula ngobuhlakani obuncane, lokho akusho ukuthi ukucabanga kwakho kulungile impela.' - UKamijou Touma
'Uma ufuna ukwenza okuthile futhi unamandla akho, kwenze!' - UKamijou Touma
'Angidingi sizathu sokulondoloza umuntu.' - UKamijou Touma
“Uma nje kungalimalanga muntu, konke kuhle. Ubani onendaba ukuthi ngubani osindise bani? ” - UKamijou Touma
'Impumelelo iza kuphela kulabo abaye baba nesibindi sokuma ngaphandle kokwesaba!' - UKamijou Touma
“Impilo yakho le? Bese uzinqumela wena! Uma ufuna ukuvikela yonke into ngezandla zakho yenza kanjalo, uma ufuna ukushiya konke bese wenza kanjalo. Kepha, yini wena uqobo ofuna ukuyenza njengamanje? Ngabe unganeliseka ngempela ngokunikeza omunye umuntu ongayiqondi ngempela into yakho ebaluleke kakhulu? ” - UKamijou Touma
“Amathuba nempumelelo eza kuphela kulabo abangalesabi ukuma kubatter’s box. Obani abafuna ukushaya ibhola ngaphezu kwanoma yini enye, futhi bashwiba ngamandla abo onke! ” - UKamijou Touma
'UNkulunkulu, uma lomhlaba, le ndaba, iqhubekela phambili ngokwenqubo oyidalile… ngakho-ke ngidinga kuqala ukubhubhisa leyo nkohliso!' - UKamijou Touma
“Ngabe uthola amandla, bese ukhetha ukuvikela omunye umuntu? Cha! Okokuqala sifuna ukuvikela umuntu, yingakho sizama ukuqina kwasekuqaleni. ” - UKamijou Touma
“Into efanayo njalonjalo. Akukhathalekile ukuthi ngifinyelela kangaki emdlalweni futhi noma ngabe kufanele ngishaye kangaki ngendlela edabukisayo ukuqhubeka, ngeke ngiyeke ukuya phambili. ” - UKamijou Touma
“Izinto ezinjengamaqhawe azinasidingo. Awukwazi ukugcina umuntu uma umi khona lapho, kuleyo ndawo? Phambi kwamehlo akho kunabantu abangafisi ukukhala abakhalayo! Phambi kwamehlo akho kunabantu abakwazi ukugoqa amazinyo abo ngenkathi bezabalaza futhi bangakwazi ngisho nokusho amagama athi 'ngicela ungisindise'! Akwanele yini lokho? ” - UKamijou Touma
2. Izingcaphuno zeMikoto Misaka
“Ngempela, yini lokho? Amandla anjalo awaveli ngisho nasesithombeni semininingwane se-Academy City. Uma ngingu-1-in-328,571 prodigy, ngabe awunguye wedwa e-Academy City, oyinhlekelele e-1-in-2,300,000? ” - Mikoto Misaka
“Awudingi isizathu esizwakalayo sokonga umngani. Uma ufuna ukubasindisa, bese ubasindisa. Ngiyamazi umuntu owayelokhu esho lezozinto eziyisiwula ngisho nalapho eqhutshwa enqenqemeni lokufa, futhi wasindisa abantu abangaphezu kuka-10 000 ekugcineni. Futhi leso silima esisindise abantu abaningi kangaka sizama ukusindisa umuntu namuhla njengasosonke isikhathi. Ngiyazi ukuthi angikwazi ukumvimba. Noma ngabe angifuni kangakanani ukuthi enze noma yini eyingozi, ukumbona ehamba ngokucindezela emuva kuwuphawu lowesifazane olungile! ” - Mikoto Misaka
“Uma uhlangothi olulodwa lubeka yonke imizamo yalo ekubulaleni umfundi ojwayelekile wesikole samabanga aphezulu kanti olunye uhlangothi lufaka yonke imizamo yabo ekusindiseni lowo mfundi ojwayelekile wasesikoleni esiphakeme, ufuna ukuba kuluphi uhlangothi? Yiluphi uhlangothi ongathi ngokuziqhenya ubukulo? ” - Mikoto Misaka
'Okufundayo esikoleni sakho kubaluleke kakhulu kunalapho ufunda khona.' - Mikoto Misaka
“Ngisanda kuqala ukukuqonda mina. Ukuthi ngokuthembela kwabanye, nokubavumela bathembele kuwe, abantu bangadlula lokho abangakwenza njengabantu ngabanye. ” - Mikoto Misaka
3. Izilinganiso zeHaruki Aritomi
“I-Idealist ithi, wonke umuntu uzalwa elingana. Sonke sinenani elilinganayo. Umdlali wezemidlalo uyamemeza, akukho mzamo ongaholi. Sebenzela kanzima amaphupho akho! Imayelana nokuthi uwudlala kanjani umdlalo. Ngokusobala konke akulona iqiniso. ” - UHaruki Aritomi
“Angazi kahle. Ngemicabango efana nokuthi 'Uma ngisindise umuntu mhlawumbe ngingaqala phansi futhi.' - Isivinini
“Lalela, noma ngabe umuntu uhlupheka ngaphambi kwakho, uhlobo lomuntu ongathatha izikhali ngaphandle kokungabaza ukudubula isikhohlakali alikho kangcono kunesikhohlakali uqobo lwaso. Uhlobo olungakhathaleli abanye, alunikezi amathuba we-2; umuntu obulala uma enikezwa isizathu, nakanjani akalona iqhawe. Akudingeki ukuthi ube yilolo hlobo lomuntu. Lokho okukhethekile kwami. Yimi kuphela okufanele ngidlule kulokho. ” - Isivinini
'Okubi kakhulu ngokuqina ukuthi akekho owake wakubuza ukuthi ngabe ulungile yini.' - Isivinini
“Zonke zingabukeka zifana kuwe, kodwa kukhona izinhlobo ezahlukene namazinga ehlukene wobubi. Isikhohlakali esisezingeni lokuqala asibhekisi izimpilo ezithembekile. - Isivinini
“Anginantshisekelo yokuba yisikhohlakali, futhi angicabangi ukuthi ngingaba umuntu olungile. Sengimaphakathi nendawo lapho ngingaqiniseki nokuthi iyiphi indlela okufanele ngihambe ngayo… kepha ngicabanga ukuthi nalapho, ngisengaphazamisa impilo yomuntu othile futhi ngisize ekufinyeleleni esiphethweni esihle. ” - Isivinini
'Abantu besibili balahlekelwa indawo yabo yokunethezeka, lapho benza khona izinto zibe lula.' - Isivinini
'Ngiphokophela okuthile okungaphezu kwamandla, ukuthi ukungiphonsela inselelo kungaba umcabango ongenangqondo kunabo bonke, wokuthi ukulwa nami kungaba yisono!' - Isivinini
“Lalelisisa, ngane. Kukhona into eyodwa okudingeka uyiqonde. Impilo yomuntu yinto entekenteke. Ibuthakathaka kangangoba ngingayibhubhisa ngokuthinta umunwe wami. Ngakho-ke bhekisisa ukuthi uthini. Uma ungakwenzi, ngingaphula okuthile okungafanele ngikwenze. ” - Isivinini
'Ngenxa yokuthi sengibe buthakathaka, akusho ukuthi usuqinile, akunjalo?' - Isivinini
5. Izilinganiso zeSogiita Gunha
“Futhi izibopho ezingagqabuki zizo… Izibopho zizo… Ah, bekuyini? Ah, kahle. Kube nenqwaba yezinto mayelana nezibopho ezingenakuqhekeka okuzodingeka ubhekane nazo ngenkathi amathumbu akho echichima! Khombisa imiphumela yokuqeqeshwa kwakho kwansuku zonke namathumbu akho! Khombisa lobo bukhazikhazi nesibindi kulabo buthakathaka ngaphandle kwabo! Ukwenza lo mqhudelwano ube inkumbulo enhle kakhulu! Ngokunqoba zonke izinhlobo zezithiyo ngokulingwa nangobunzima nangokuvuka njalo lapho siwela phansi! ” - Sogiita Gunha
6. Izilinganiso zeShinobu Nunotaba
“Isono, uma sesenziwe, asikhohlwa nanini. Kukuhlupha kuze kube phakade. ” - UShinobu Nunotaba
Izilinganiso ezingama-25 ezinamandla ze-Anime Ezivela Kusitimela Esithile Sesayensi!
i-anime ehamba phambili ongakaze uzwe ngayo
Iqoqo Lamacaphuni Kusuka Ku 'The Neverland Othenjisiwe'
i-anime engcono kakhulu yamahlaya sonke isikhathi
kufanele ubuke i-anime sonke isikhathi